အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: မြွေတစ်ကောင်၏ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း။
ကျနော် တော်တော်ဟုတ် မဲ့လူ
အသက် (၂၀) ၊ စိုက်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား
သီချင်းဆို စာရေး။ လူမှုရေး သာရေးနာရေး
ကောင်မလေးတွေကို ဂိုက်ပေးတတ်တဲ့ အရွယ်
ကျောင်းပြီး အလုပ်ဝင် စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင်
ဇနီးချော အိမ်ပါ ငွေပါ
ဘယ်သူလဲ ကျနော့ ရဲ့ မယ်သီတာ။
အသက် (၃၀) ကျနော်ကြီးကြပ်ရေးမှူးး
မိန်းမရှိ သားရှိ သမီးရှိ
ဘ၀မှာ အတော် အသင့်ပြည့်စုံ
လိုချင်တာတွေ လည်း အများ
အော် များများ မဟုတ်ပါ။
ကျနော် ဒီလောက်လောဘ မကြီးပါဘူး။
ဘဏ်စာရင်း သုညနောက်တိုး အကြီးကြီး
နိင်ငံခြားပညာတော်သင် ဘွဲ့ အမြီး
ရနိုင်မယ်ဆို ရာထူးလေးလည်း ပိုလိုချင်
တိုင်ကွယ်မယ်ဆို အ၀ှါလေးလည်း လိုချင်
မယားဝယ်မဲ့ လက်ကောက်တွေ အကွင်းမစေ့သေး
ကလေးတွေ ကျောင်းထားဖို့ နောင်ရေး
အထက်က အရာရှိက ဟောက်ဟီး
မယားတမျိုး သားတမျိူး သမီးတမျိူးး
ကျနော့ နားတွေ ပင်းခဲ့သူ။
အသက် (၄၀) ကျနော် ဦးစီးအရာရှိ
အောက်ကသူကို ဟောက်ရန် ပါဝါ အနည်းငယ်ရှိ
အိမ်မှာက ပါဝါ နတ္တိ
အဖေ မပြောနဲ့ကျမသိတယ်၊ ကျနော်သိတယ်
အဖေ့ နေရာက ငွေရှာရုံဘဲ။
ဘ၀ကလေး က ပြည့်စုံစ
ဗိုက်ကလေး က ဘော်လုံးလေးလို လှ
အသောက်အစား အသုံး အဖြုန်း
ကာရာအိုကေ အနှိပ်ခန်း သုံးတာ ငွေကြမ်းတယ်။
ရသမျှ under table မယား မသိဖူး။
ဒါ ကျနော့ ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံးအရွယ်။
အသက် (၅၀) ကျနော် ဆံပင်ဆိုးရမဲ့ အရွယ်။
ကျနော်အကောင် ဂျို ထောင် လက်မထောင်
ကလေးတွေ တက္ကသိုလ်က ဆင်း
အဖေ့ထက် သာလာတဲ့ အရည်အချင်း
အပြင်ကျ ကျနော့ သား ဘယ်သူကွ
ပိုးပုဆိုး တရွမ်းရွှမ်း ခန့်ထည်ထည်
ဖိတ်တဲ့ပွဲတိုင်း ဆက်ဆက်လာ ခဲ့မယ်။
အသက် (၆၀) အရွယ်ဟိုင်း
ကျနော် ငယ်ပါသေးတယ်။ ပင်စင် မယူပါရစေနဲ့ ။
ကျနော် နု ပါသေးတယ်။ ထိုင်ခုံမစွန့် ပါရစေနဲ့ ။
ငယ်သူတွေ ကျနော့လောက် မသိပါ
ကျနော် မရှိ နိုင်ငံတော် အကျိူးစီးပွါးထိမယ်။
ဂျို ထောင် အတ္တကို အရောင်ခြယ်ခဲ့
မွေးစာရင်း အသက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်
ယူခဲ့ရပြီး အညိမ်းစား ညွှန်မှုး ထိုင်ခုံ လပ်
အလုပ်နဲ့ သေခန်းဖြတ်လိုက် ရတဲ့ သူ
တိုးလိုက်တဲ့သွေး။ ချိူ လိုက်တဲ့ဆီး
များလိုက်တဲ့အဆီ။ နှလုံးခုန်သံက မမှန်ပြီ
ဒူးက လည်းနဲ့ ၊ ဇက်ကလဲ ရွဲ့ 
ခါးကလည်းနာ၊ အဆစ်တွေ လည်း ချာလာပြီ
ပိုက်ကလည်း ပူ။ အစာလည်း မကျေသူ
နှာစေးခေါင်းကိုက် ချောင်းဆိုး အဆုတ်
ရာသီ ချိန် တုတ်ကွေးလည်း၊ ကိုယ်ဘဲ ဒီဖောက်သည်
အသက်ရှုကျပ် ညည အ်ိပ်မပျော်
ဘုရား ဘုရား..ငါလည်း ဘယ်နေ့ များပါလိမ့်။
ရဟန်းတို့ ၏ မြင့်မြတ်လမ်း.
လောကုတ္တရာကမ်း သို့ လမ်းပြင်
အခု ဦးကျိူးးသွားခဲ့သော မြွေ။
စတာပါ အကိုကြီးတို့မောင်လေးတို့ သူငယ်ချင်းတို့ ။ မသဒ္ဓါ သရော်စာ ရေးရေးနေတာ ကြာပါပြီ။ မိမိ အဖြစ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင်လည်း မသဒ္ဓါ တဲ့တဲ့ရေးတယ်ဘဲ ထင်လိုက်ပေါ့။ မဟုတ်ရင်တော့လည်း ငါမဟုတ်ဖူးဘဲ သဘောထားလိုက်ပါ. အမှန်က အပျော်ပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:36 AM
နောက်ပြန်မလှည့် ရှေ ဆက်တက်။
အလွဲများ နှင့် ပျော်မွေ့ ခြင်း.
လွတ်တဲ့ ငါးက ကြီးစရာမလို၊
နှင်းဆီ နှင့် သူ၏ဆူးများ
မနက်ဖြန်သို့ပြင်ဆင်ခြင်း။